globalpressonline » Laba boqol iyo afar labaatan ( 224) Xildhibaan oo ka mid ah Baarlamaanka Somaliya, ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre
Laba boqol iyo afar labaatan ( 224) Xildhibaan oo ka mid ah Baarlamaanka Somaliya, ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre
Mar 29, 2017 - Comments off
Mogadishu. Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa goor dhow cod aqlabiyad leh ku meelmariyay Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre. Gudoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Somaliya, C/weli Sheekh Ibraahim Muudey oo shir guddoominaayay kulankan, ayaa ku dhawaaqay in 224 Xildhibaan ay haa ugu codeysay Golaha Wasiirada, iyadoo 15 ay diiday halka 2 kalana ay ka aamustay. Gudoomiye Kuxigeenka, ayaa sheegay in Xukuumaddu tahay mid ansax ah. Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa Xildhibaanada kaga mahadceliyay taageeradooda. Ra’iisal Wasaaraha, ayaa 21-kii bishan soo magacaabay 26 Wasiir, 26 Kuxigeeno, 15 Wasiiru Dowlayaal iyo hal Ra’iisal Wasaare Kuxigeen.
Hore ayaa waxaa diidmo ka keenay 105 Xildhibaan, oo soo jeediyay in Ra’iisal Wasaaruhu uu wax ka bedelo magacaabista Golihiisa Wasiirada, iyagoo ku dooday inaanu magacaabistoodu ku salaynin hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5. Madaxweyne Farmaajo, ayaa Axadii Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ka codsaday inaanan la khilaafin magacaabista Golaha Wasiirada, isla-markaana uu ugu baaqayo in ay kalsoonidoodu siiyaan. Madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha iyo Golaha Wasiirada, ayaa waxaa soo maray toddobaad uu hareereeyay qalalaaso siyaasadeed.